Kungani I Channel Umhubhe Ngakho Okubalulekile Ukuthola Europe? | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Kungani I Channel Umhubhe Ngakho Okubalulekile Ukuthola Europe?
Esikhathini esingengakanani ngemva kokuba Umhubhe Channel abaningi abayibiza ngokuthi Umhubhe Eurostar wavula e 1994, ke ebizwa omunye Wonders Eziyisikhombisa Umhlaba Modern. Ngokwe-American Society of Civil Onjiniyela, ukuthi isihloko kwakumfanele kahle. It ubeke Umhubhe Channel phakathi izimangaliso yezakhiwo efana Empire State Building kanye CN Tower.
I Eurostar Umhubhe ngokuqinisekile iyisimangaliso kanye feat omkhulu wokwakha. Kodwa kungani kubaluleke kangaka Europe? Yayiyini ukukhinyabezeka kwayo, futhi Kukuyiphi imizi angasebenzisa abahambi ukufinyelela ngokusisebenzisa? Ake ube sihlolisise Channel Umhubhe ukubaluleka:
History Of The Umhubhe Eurostar
Yize ukwakhiwa kwalesi Umhubhe Channel waqala e 1988, lokho akusho ukuthi umqondo omusha. Ngisho Napoleon toyed wokuphika yokuxhuma naseFrance nge Umhubhe. Phambi kwakhe, unjiniyela French Albert Mathieu-Favier wokuqala ohlongozwayo emhubheni elinjalo e 1802. umqondo wakhe wawuhlanganisa isiqhingi yokufakelwa endleleni, njengoba ihhashi-ukushintsha esiteshini. Nokho, izinhlelo kunazo bashiywa kuze ngemva kweMpi Yezwe II.
Ngo 1987, the amaphalamende UK neFrance lagcina livumile ukutsheleka i ukwakha Umhubhe Channel. Le phrojekthi kuhlanganisiwe ukwakhiwa Imigudu ezintathu - ezimbili wesitimela traffic futhi eyodwa njengomnikelo Umhubhe isevisi. Ukuthuthukiswa wathatha iminyaka eyisithupha, $7.2 bhiliyoni, nanye imishini Kuyisidina, futhi 13,000 abasebenzi. izindleko zayo okulingana lanamuhla $12 bhiliyoni.
Isiteshi Umhubhe Amaqiniso
I Channel Umhubhe kuyinto 31.35 lolu hambo olude, nge kwesigaba kwamanzi ka 23.5 amamayela. Kuyinto yakhula kakhulu esigabeni undersea emhlabeni eyehlayo 250 ft ngezansi embhedeni ulwandle engxenyeni yalo ephansi. Umhubhe uxhuma Folkestone eNgilandi nge Coquelles, Pas-de-Calais e France. It uyagijima ngaphansi kwe-English Channel at Strait of Dover.
Yini eyenza Umhubhe Channel olukhethekile ukuthi izixhumi kuphela Great Britain izwekazi laseYurophu. futhi izitimela ngesivinini kuyatholakala namuhla, kungcono enye yezindlela esheshayo ukuhamba kusukela UK izwekazi laseYurophu.
Umphumela Ukuvula Umhubhe Channel
I Eurostar Umhubhe odlale indima omkhulu wokwenza ujantshi ukuhamba kufinyeleleke kwaphinda lokho. Bona ozazisa ngokukhethekile ke e-UK, njengoba kwenza kwaba lula ukuhamba eYurophu ngaphandle flying. Kuyasiza abahambi ukunciphisa izindleko zohambo, kanye carbon wabo lokungcolisa. Eurostar ilinganisela ukuthi ukuhamba esuka eLondon aye Paris ngu likhipha isitimela 90% -greenhouse gas encane kwekhabhoni kuka ukuthatha indiza.
Ingxenye best mayelana Umhubhe Isiteshi uxhumano yayo enkulu European ujantshi amanethiwekhi. Ukusebenzisa ke, ungathola ukuthi lamadolobha amadala kakhulu eziyinhloko zaseYurophu kusukela UK. Futhi ake Ungakhohlwa kungcono zingenza ukufinyelela emadolobheni amakhulu UK efana London ngaphandle flying. Kuba okungabizi, fast and ngendlela ephephile ukuhamba.
ILondon ukuya eLyon Highsped Sitimela
Uma Umhubhe Channel owuthanda wena, ukuthatha ukugibela ngokusebenzisa ke! Lolu hambo kungenzeka kungabi ebabazekayo, kodwa sikhalo salo itholakala lula yayo. Uma udinga ukuya noma idolobha e-UK, ukubhuka amathikithi akho isitimela namuhla!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fchannel-tunnel-europe%2F%3Flang%3Dzu- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml futhi ungakwazi ukushintsha / ja ku / de noma / futhi ngezilimi ezingaphezu.
#channeltunnel #traveleurope europetravel eurostar i-eurotrip London longtrainjourneys trainjourney Tranride amathiphu isitimela Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi amathiphu isitimela sokuvakasha travelfrance
Izeluleko Zokuhamba ze-Eco, Ukuhamba Ngezitimela, Qeqesha Ukuhamba i-Austria, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi China, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Qeqesha Ukuhamba Italy, Qeqesha Ukuvakasha eSwitzerland, Izikhangibavakashi Europe